Rebranding: Olee otú ịnakwere mgbanwe ga-esi eto ika ụlọ ọrụ gị | Martech Zone
Ọ na-aga n'ekwughị na rebranding nwere ike iwepụta nsonaazụ dị mma maka azụmahịa. Ị makwa na nke a bụ eziokwu mgbe ụlọ ọrụ ndị ọkachamara n'ịmepụta ụdị aha bụ ndị mbụ weghachiri aha ha.
Ihe dị ka 58% nke ụlọ ọrụ na-atụgharị aha dị ka ụzọ iji bulie uto dị ukwuu site na ọrịa COVID.
Òtù Azụmahịa Ụlọ Ọrụ Mgbasa Ozi
anyị na Lemọn ahụla n'onwe ya ole rebranding na nnochite anya ika nwere ike tinye gị n'ihu asọmpi gị. Otú ọ dị, anyị amụtala n'ụzọ siri ike na dị mfe dị ka rebranding nwere ike ịda, ọ bụghị naanị ịmepụta akara ọhụrụ ma ọ bụ ịnweta aha ọhụrụ. Kama, ọ bụ usoro na-aga n'ihu nke imepụta na idowe njirimara ọhụrụ - na-ebufe ozi ị chọrọ ka ndị ahịa gị na-akpakọrịta na ika gị.
Akara dị mma n'ofe nyiwe niile na-abawanye oke ego nke otu ụlọ ọrụ ruru pasenti 23.
LucidPress, steeti nke ika nkwekọ
Ma nke a bụ nanị ole na ole. N'okwu a dị mkpirikpi na ruo n'ókè, anyị ga-ejegharị gị site na nhazigharị aha, kesaa ndụmọdụ, kpughee ọnyà ndị a na-ahụkarị, ma gosi gị otu esi agbanarị ha.
Akụkọ Rebrand Lemon.io
Ọ na-ewe naanị sekọnd 7 iji nweta mmetụta mbụ siri ike.
Nke ahụ pụtara na sekọnd asaa nwere ike ịbụ naanị ihe ị ga-eme ka onye ahịa nwere ike họrọ gị karịa asọmpi gị. Ọ bụ ezie na nke a bụ ihe mgbochi n'onwe ya, ime ka ndị ahịa na-aga n'ihu na-ahọrọ gị na-esikwu ike karị. Nghọta a dugara anyị n'ọganihu anyị na-etinye n'ọrụ taa.
Ka m mee ka ị bata na akụkọ ihe mere eme nke lemon.io.
Emebere Lemon.io na 2015 mgbe onye nchoputa (Aleksandr Volodarsky) chọpụtara ọdịiche dị na niche onye na-akwụ ụgwọ n'efu. N'oge ahụ, akara bụ ihe ikpeazụ n'uche anyị. Dị ka ọtụtụ azụmaahịa ọhụrụ, anyị mehiere n'isi mmalite nke njem anyị, otu n'ime ha bụ ịkpọ onwe anyị "Coding Ninjas." Kwere m, ọ dara n'oge ahụ n'ihi na ọ na-ewu ewu, anyị etinyewokwa ọtụtụ ihe anyị lekwasịrị anya na imepụta ọdịnaya.
Agbanyeghị, anyị nwetara edemede mkparị mgbe anyị chọpụtara na uto azụmaahịa ebelatala ma ọdịnaya naanị ya anọghị nso iji zuo oke maka ịga nke ọma nke azụmahịa anyị. Anyị chọrọ ihe karịrị nke ahụ iji mee ya n'ụwa ndị na-ewe ndị ọrụ onwe ha na-asọmpi nke ukwuu. Nke a bụ mgbe akụkọ nrụgharị anyị malitere.
Enwere ọtụtụ nkuzi na-atọ ụtọ nke anyị mụtara na njem nrụgharị anyị, anyị nwere olileanya na, ka anyị na-akọ akụkọ anyị, ị nwekwara ike iburu ole na ole ga-abara akara gị uru.
Ihe mere e ji chọọ rebrand
Ị nwere ike ịnọ na-eche ihe mere anyị ji tinye aha ọhụrụ na ihe ọ dị mkpa.
Ọ dị mma, ewezuga eziokwu ahụ bụ na anyị gafere oge Ninjas na Rockstars wee soro ụlọ akwụkwọ mmemme dị na India kerịta aha na-ada ụda oge ochie, anyị chọpụtakwara na anyị kwesịrị ịdị na-agbasi mbọ ike ka anyị dịrị ndụ n'ahịa nweere onwe ya nke ukwuu. Niche nke ụlọ ahịa ndị nweere onwe ha juru eju nke na naanị otu ụzọ ị ga-esi pụta ìhè bụ inwe akara siri ike ma dị egwu.
Na mbụ, anyị kwenyere na ọdịda anyị bụ n'ihi imewe anyị, anyị na-adịkwa ngwa ngwa ịbịakwute onye mmepụta ma rịọ ya ka ọ gbanwee blọgụ ahụ, bụ nke o ji nkwanye ùgwù jụrụ ma tụọ aro rebranding zuru ezu. Nke ahụ bụ ntu ikpeazụ n'ime igbe ozu ahụ, ọ bụkwa n'oge ahụ, ọ dị mkpa ka a na-atụgharị aha ọzọ pụtara ìhè. N'ezie, anyị ghọtara na anyị enweghị akara ọ bụla, na dị ka ndị dị otú ahụ, anyị kwesịrị ịmepụta otu. Nke a ka bụ otu n'ime mkpebi kacha nkwuwa okwu na kacha akwụghachi ụgwọ anyị metụrụla dị ka otu nzukọ.
Ịmụta na Lemon.io
Nke a bụ snippet nke nzọụkwụ site na otu anyị si mee usoro ngbanwe aha. Ntuziaka anyị adịghị agwụ agwụ; Otú ọ dị, anyị ga-emesapụ aka dị ka o kwere mee site na ozi sitere na ahụmahụ anyị. Nke a bụ nchịkọta nke usoro anyị gbasoro:
Anyị kere a ika persona na a ika mascot - Mmekọrịta dị n'etiti ha abụọ dị ka nke a: Onye ika gị bụ onye bụ isi nke akụkọ gị, onye ga-ezute ihe mgbochi n'ụzọ ihe mgbaru ọsọ ha. Akara mascot bụ nke ga-enyere ha aka imeri ihe isi ike niile ma mesịa ruo ihe mgbaru ọsọ ha. N'ezie, onye ika ika na-anọchite anya ndị na-ege ntị ma ọ bụ ndị ahịa anyị lekwasịrị anya, ma mascot na-anọchite anya anyị nke ebumnuche ya bụ idozi nsogbu ha.
Anyị chepụtara maapụ Brand Persona's Buying Decision (BPBD). - Maapụ BPBD bụ ndepụta nke ihe ga-amanye ndị na-ege anyị ntị ịzụta ihe n'aka anyị yana ihe ndị ga-eme ka ha ghara. Nke a nyeere anyị aka ịghọta mkpebi ịzụrụ nke onye ika anyị wee mara nke omume ga-ewepụ ha. Usoro ahụ gụnyere ịdepụta ihe kpatara ma ọ bụ ihe kpatara na ndị na-ege anyị ntị ga-eji zụta n'aka anyị.
Akara kacha mkpa matrix – Nke a bụ anyị ika si mbuli elu pitch nke mere ihe niile whys na hows nke anyị azụmahịa' ịdị adị. Ọ na-egosipụta ihe azụmahịa anyị na-eme ma na-ekwupụta ụkpụrụ akara anyị.
Akụkọ ika - Akụkọ ika ahụ dugara anyị n'ịkpọ aha kachasị mma, nke anyị mechara nakwere.
Nsonaazụ ntọgharị Lemon.io
Uru ndị a na-apụghị ịhụ anya nke rebranding gụnyere na ọ wetara anyị obi ike, mkpali, mmetụta nke ihe pụtara na nzube, ọ bụghị n'ịkpọbata nnabata nke anyaụfụ.
Ma, n'ezie, ihe kacha mkpa bụ mmetụta nke rebranding nwere na ala ala anyị. Ụzọ kachasị mma isi gosipụta nke a bụ site na ọnụọgụgụ n'ihi na ọnụọgụgụ anaghị agha ụgha.
Nsonaazụ ya dị oke egwu wee hụ ka anyị ruru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 60% nke ngụkọta akara okporo ụzọ enwetara n'ime afọ ise gara aga n'ime ọnwa iri nke ibido akara Lemon.io anyị.
Rebrand zuru oke hụrụ ka anyị si na ndị ọbịa 4K na-aga 20K na nkezi na ọnwa kacha mma anyị. Anyị nwetara mmụba dị ịrịba ama nke ugboro 5 ndị ​​ọbịa anyị na ndị ahịa anyị na-etinye anyị na egwu maka 10M GMV na 2021. Lelee ihe ngosi eserese ndị a nke uto a:
Tupu: Ịdekọ okporo ụzọ Ninjas site na mmalite nke ụlọ ọrụ na ruo mgbe rebranding:
Mgbe: Ọganihu emere n'ime ọnwa itoolu nke rebranding.
Kedu mgbe ị ga-atụgharị aha ma ọ bụrụ na ị bụ mmalite (dabere na ahụmahụ Lemon.io)?
Oge bụ ihe niile. Rebranding na-achọ nnukwu ọrụ ma na-eri ọtụtụ ihe onwunwe, ọ dịkwa mkpa ịme mkpebi ndị gbakọrọ ọnụ.
Kedu mgbe bụ oge kacha mma maka rebranding?
Na Lemon.io, anyị maara na ọ bụ oge ịgbanwe onyinyo ụlọ ọrụ nke nzukọ anyị mgbe:
Ọ naghị arụ ọrụ! Ihe kacha zie ezi anyị maka rebranding bụ ịghọta na ika anyị ugbu a anaghị eweta nsonaazụ achọrọ. N'ọnọdụ anyị, ọ bụ obere okporo ụzọ anyị na-enweta n'okpuru "Coding Ninjas". Anyị kwenyere na anyị ga-emeziwanye ọdịnaya anyị ruo mgbe anyị mechara chọpụta na edobere anyị n'ụzọ ziri ezi n'ahịa, na anyị kwesịrị ịmegharị aha ka anyị pụta ìhè.
Enwere nnukwu mgbanwe na azụmahịa anyị - Ụlọ ọrụ na-agbanwe mgbe niile. Ọ bụrụ na azụmahịa gị agbanweela ma ọ bụ na ị dezigharịrị akara ngosi akara ngosi nke ịchọrọ ma chọọ ịbanye na ya nke ọma, ịmegharị aha nwere ike ịbụ nhọrọ. Tupu ịgbanwee na Lemon.io, anyị rụpụtara ụdị ndị ọzọ a na-ahụ anya na ndị ahịa, nke mechara nyere anyị aka ime nhọrọ kacha mma wee pịa ebe kwesịrị ekwesị.
Tupu anyị aghọọ onye a ma ama – Anyị nwere ihe ùgwù nke rebranding tupu anyị ama ama n'okpuru aga aha. Anyị enweghị ike ịgọnarị eziokwu ahụ na ihe egwu ndị metụtara rebranding na-abawanye na mmụba nke ama ama. Tupu amata gị, ihe egwu dị na ya dị ala ebe ndị mmadụ agaghị amata.
Anyị nwere akụrụngwa zuru oke - Rebranding na-achọ akụrụngwa, yabụ na ọ dị mma mgbe ị nwegoro azụmaahịa nwetarala ego zuru oke iji malite usoro nrụpụta aha.
Kedu mgbe na-abụghị oge kwesịrị ekwesị maka rebranding?
E kwesịghị ịmegharị aha ọzọ n'enweghị ezigbo ihe kpatara ya. Ị maara na mkpali gị maka rebranding adịghị mma mgbe ọ sitere na mmetụta uche kama ịbụ eziokwu.
Ike gwụrụ na imewe logo? Ike gwụrụ bụ ihe dị egwu kpatara rebranding. Naanị n'ihi na ị naghịzi ahụ akara ngosi ahụ mara mma nke ukwuu apụtaghị na ị ga-agbanwe ya. Ọnụ ego ahụ abaghị uru.
Mgbe ọ nweghị ihe gbanwere na nzukọ gị - Ọ bụrụ na enweghị mgbanwe dị ịrịba ama na nzukọ gị, rebranding enweghị isi. Ọ dịghị mkpa ịgbanwe usoro na-arụ ọrụ ugbua.
Naanị n'ihi na ndị asọmpi gị na-atụgharịkwa aha – Ọ dịghị mkpa na-aga na ìgwè mmadụ. Mkpebi rebranding kwesịrị ịdabere na mkpa gị n'otu n'otu na nghọta gị nke ebumnuche ogologo oge gị yana echiche zuru oke.
Rebranding dị ka itinye ego n'ọdịnihu maka azụmahịa gị
Ọ bụ eziokwu a na-apụghị ịgbagha agbagha na n'agbanyeghị nnukwu mmefu nke oge na ihe onwunwe n'oge usoro nrụgharị ahụ, rebranding bụ mgbe niile itinye ego n'ọdịnihu. Ọgwụgwụ na-akwado ihe niile na-etinye aka na usoro ahụ. Dị ka anyị gosipụtara na mbụ, ọnụọgụ na-egosi mmụba dị ukwuu na ahịa mgbe anyị degharịrị aha. Usoro ahụ dị mma maka ma akara ala anyị na onyonyo ụlọ ọrụ anyị.
Rebranding nke ọma na-abawanye arụmọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, na-akwalite ọnọdụ doro anya, mmepe nke ahịa ọhụrụ na mpaghara ọrụ.
Usoro nke imepụta aha ma ọ bụ rebranding bụ ọrụ na-atụ ụtụ isi nke e ji ihe dị elu na ọnụ ala karịa ka o siri dị na akụkọ anyị. Ọ na-achọ atụmatụ akọ, oge ziri ezi, na akụrụngwa zuru oke iji nweta ya nke ọma wee mepụta akara ga-eme nkwupụta n'ezie, melite ego ị na-enweta ma melite ọdịdị ọha gị. Nhazigharị aha pụtakwara ime ndozi ka ọ na-agakọ n'oge.
Tags: ụlọ ọrụ mgbasa ozi ụlọ ọrụ azụmahịaBPBDbrandika mascotmkpebi ịzụrụ onye ikalemon.ioUche Nwosurebranding